अमेजनको एक दिनको बिक्री - BGR - TELES RELAY को साथ सबैले किन भारित कम्बललाई धेरै माया गर्छन् भनेर पत्ता लगाउनुहोस्
Fire २ Fire फायर टिभी स्टिकको आश्चर्यजनक बिक्री, $ ११ rob रोबोट भ्याकुम क्लीनर,…
रोम्बासलाई बिर्सनुहोस्, यो पागल बिक्रीले भ्याकुम क्लीनरलाई $ ११ to मा कम गर्दछ ...
तपाईंको पुरानो जर्जर ओछ्यानलाई क्लाउड जस्तो नरम बनाउनुहोस्…
के तपाईंले कहिल्यै एक को बारे मा सुन्नुभएको छ? Thundershirt कुकुरहरु को लागी? यो मूल रूपमा कम्प्रेसन शर्ट हो जसले तिनीहरूलाई हल्का रूपमा निचोल्छ, र आँधीबेहरीको मौसममा चिन्ता कम गर्न मद्दत देखाईएको छ ताकि तपाईं अझ राम्ररी आराम गर्न सक्नुहुन्छ। भारित कम्बलहरू वास्तवमा उस्तै हुँदैनन्, अवश्य पनि, तर यो उही विचार हो। राम्रो भारित कम्बल जस्तो निद्रा, तनाव र चिन्ताको लागि भारित कभरेज दबाब को सही मात्रा लागू गर्दछ। तपाईं आराम गर्न, छिटो निदाउन, र लामो निदाउनमा तिनीहरू मद्दत गर्नमा कत्ति प्रभावकारी छन् भन्नेमा तपाईं चकित हुनुहुनेछ, तर उच्च गुणस्तरको कम्बलहरू प्रायः महँगो हुन्छन्। यसैले तपाईले निश्चित रूपले ग्रेभिटी कभरेजमा अमेजनको एक दिवसीय बिक्रीको फाइदा लिनुपर्दछ, जसले ठूलो रूपले कम गर्दछ २० पाउन्ड संस्करण दुई भन्दा कम रंग विकल्पहरूमा यसको न्यूनतम मूल्यमा। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईं पक्कै पनि यो ठूलो सम्झना गर्न चहान्नुहुन्न!
यहाँ उत्पादन पृष्ठमा थप जानकारी छ:
खराब निद्राबाट पीडित? गुरुत्वाकर्षण एक प्रीमियम भारित कम्बल हो कि शरीरमा हल्का तौल प्रयोग गर्छ निद्राको गुणस्तर सुधार गर्न।
वजन: १,, २० र २ l lb विकल्पहरूमा उपलब्ध; हामी तपाईंलाई आफ्नो शरीरको वजनको १०% प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा छनौट गर्न सिफारिस गर्दछौं। केवल सबैभन्दा भारी विकल्प छनौट नगर्नुहोस्! तपाईं आफ्नो शरीरको वजनको १०% मा कपाट चाहनुहुन्छ।
आकार: गुरुत्वाकर्षण measures२ "x" 72 "मापन गर्दछ, एक पटकमा एक प्रयोगकर्ताका लागि ग्राउन्डिंग अनुभव प्रदान गर्दछ। हामीले यसलाई यो स्प्रे कभर साइजमा डिजाइन गर्यौं ताकि प्रयोगकर्तालाई समान तवरले वितरण गर्न सकिन्छ र किनकि प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको शरीरको तौलका लागि विशेष वजन चाहिन्छ।
निर्माण: बाहिरी डुभेट कभर सुपर नरम माइक्रोफ्लिसबाट बनेको छ। भारित भित्री आवरण कपास र गुणस्तरको गिलास मोतीले बनेको हुन्छ, र ड्युभेट कभरको भित्र स्थानमा टाँसिन्छ र लोचदार बटनहरूको साथ स्ट्र्यापहरू द्वारा राखिन्छ। भारित ईन्टीरियरमा ग्रिड सीमहरूले गिलासका मोतीहरू समान रूपमा प्रयोगको बखत वितरित भएको कुरा सुनिश्चित गर्दछ।
रखरखाव: डुभेट कभर मेशिन धुने योग्य छ; भित्री आवरण हात धुने मात्र हो।
पालना @BGRDeals ट्विटर मा वेबमा हामीले भर्खरको र सबैभन्दा ठूलो सम्झौताहरू पालना गर्न। मूल्यहरु बिना सूचना बिना परिवर्तन गर्न सकिन्छ र माथि उल्लेख गरिएको कुपन सीमित परिमाणमा उपलब्ध हुन सक्छ। BGR ले यो लेख मार्फत राखिएको अर्डरमा एक कमिशन प्राप्त गर्न सक्दछ, र खुद्रा विक्रेता लेखा उद्देश्यको लागि केहि निश्चित सत्यापन डाटा प्राप्त गर्न सक्दछ।
TELES RELAY 24130 पोस्ट0टिप्पणी
क्यामरून अर्थव्यवस्था: हाम्रो हार्डवेयर स्टोरहरूमा सिमेन्टको नयाँ ब्रान्ड
TV २ for का लागि फायर टिभी स्टिकको आश्चर्यजनक बिक्री, ot ११ u को लागि रोबोट भ्याकुम क्लीनर, बार ब्लाउआउट…
Roombas बिर्सनुहोस्, यो पागल बिक्री पहिलो sale $ rob मा पहिलो रोबोट भ्याकुममा कम भयो ...
तपाईंको पुरानो जर्जर ओछ्यानलाई गद्दा टपर्सको साथ बादल जस्तो नरम बनाउनुहोस् ...
डायसन मेरो लागि अब मरेका छ कि मैले यो बिस्सेल भ्याकुम क्लिनर चलाएको छु, र ऊ ...